उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने ८ उपाय | दिव्य जागरण
प्रकाशित मिति : April 16, 2017
नियन्त्रण गर्ने ८ उपाय
व्यायामले रक्तचाप घटाउन मद्दत पु¥याउँछ । हिँड्ने, विस्तारै कुद्ने, पौडी खेल्ने, साइकल चलाउने जस्ता व्यायामले रक्तचाप नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्छन् । यस्ता व्यायाम नियमित गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । सबैभन्दा सजिलो र प्रभावशाली व्यायाम नियमित रुपमा दैनिक १ घण्टा कम्तिमा ४ किमी प्रति घण्टाको दरले हिँड्नु हो । हिँड्दा शरीरलाई बढी सकस पर्नु चाहिँ हुँदैन । छाती दुख्ने वा दम फुल्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरी व्यायाम गर्नु हुँदैन । विस्तारै शुरु गरेर पछि तिव्रता बढाउँदै जानुपर्छ ।
६. खानपानमा ध्यान पु¥याउने
किन खाने लौका ?
बेसारपानी पिउनुका फाइदा के हुन् ?